Waa sidee xaalada dhaawaca Gerard Pique kahor kulanka El Clasico? – Gool FM
(Barcelona) 28 Feb 2020. Wargysyada Spain ayaa maanta oo Jimco ah waxay ka hadleen suurtogalnimada uu Gerard Piqué kaga qeyb qaadan karo kulanka El Clásico ee lagu ciyaari doono Axada soo aadan garoonka Santiago Bernabeu.
Sida laga soo xigtay wargeyska “Marca” ee dalka Spain ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in Gerard Piqué uu ka qeyb galay tababarkii saakay ee Jibcaha ay sameysay kooxda Barcelona, isla markaana uu diyaar u yahay inuu ka qeyb galo kulanka El Clásico.
Gerard Piqué ayaa soo gaaray dhaawac canqawga ah, kaasoo sababay inuu ka baxo kulankii lugta hore wareega 16-ka tartanka Champions League ay ku wada ciyaareen Nopoli ee ku soo dhamaaday bar-bardhac 1-1 ah, kaddib markii uu awoodi waayay inuu dhameystirto.
Blaugrana ayaa wajaheysa dhibaato dhab ah ka hor kulanka El Clasico, taasoo la xiriirta dhaawacyada ay qabaan qaar ka mid ah xiddigaha kooxda gaar ahaan Sergi Roberto iyo Jordi Alba.